Tsy fanajana ny lalàna : tsy hahasarika ny mpampiasa vola i Madagasikara | NewsMada
Tsy fanajana ny lalàna : tsy hahasarika ny mpampiasa vola i Madagasikara
Fepetra sy singa jeren’ny vondrona iraisam-pirenena ny fisian’ny fanjakana tan-dalàna na tsia ao amin’ny firenena iray. Sarotra ny inoana ny fisian’io eto Madagasikara, raha ny tranga sy ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Hanamarinana izany, vao tsy ela (notaterina teto ny asabotsy 30 janoary teo) ny didim-pitsarana tsy mazava, nahafahan’ilay ramatoa iray, efa nanaiky ny fandroahana azy tao amina orinasa, ary nitombina ny anton’ny nandroahana azy (famoahana tsiambaratelon’ny orinasa), nefa nahazo onitra 567 tapitrisa Ar (nangataka 2,3 miliara Ar).
Mihoa-pampana ny onitra nasaina aloan’ny orinasa notorina, misehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany vaventy. Iaraha-mahalala anefa ny fahasahiranan’ity sehatra ity eo amin’ny tsena iraisam-pirenena vokatry ny fitotongan’ny vidiny. Vao mainka hasarotina eto amintsika, tsy ahitana soritra ny fanohanana ny sehatra tokony hitondra tombontsoa ho an’i Madagasikara, amin’ny alalan’ny asa aterany, ny hetra ampidirina, ny fiarovana sy antoka ho an’ny fandraharahana.
Lafo ny fampisam-bola nefa tsy arovana
Raha sendra mety nisy tsindry nataon’ny manodidina ny filoham-pirenena mikasika io raharaha io ny fitsarana, handoto ny endrik’i Madagasikara amin’ny lafiny fampiasam-bola vahiny izany (IDE). Manamarina izany ny laharan’i Madagasikara amin’ny fandraharahana “Doing Business” faha- 164 amin’ny firenena 189. Efa sarotra ny fampiasam-bola eto amintsika, vokatry ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa ampy, toy ny tsy fahampian’ny angovo sy ny herinaratra, ny lalana, sns. Saika tsy sahy mirotsaka amin’ireo sehatra voalaza ireo koa anefa ny mpampiasa vola vahiny, satria lafo ny masonkarena ilaina. Ary indrindra, araka ny voalaza etsy ambony, mampanahy sy mampatahotra ny mpandraharaha vahiny ny tsy fisian’ny fanjakana tan-dalàna, fototra sy antoka amin’ny fampiasam-bola. Mampanahy ny hoavin’i Madagasikara.